Nhau - Misimboti yakati wandei yesarudzo yekutanga yekukanganisa
Mitemo yakati wandei yesarudzo yekutanga yekukanganisa
Simbi ngura iri kwese kwese, nguva dzese
Kudzivirira kuita ngura kwesimbi, nzira yakajairika ndeyekushandisa machira kudzivirira pamusoro pezvigadzirwa zvesimbi. Iyo yepamusoro inofanirwa kucheneswa pamberi pekudzivirira kwekuvhara Mazana ezvigadzirwa nemaindasitiri anosanganisira ngarava, matangi ekuchengetera, mabhiriji, zvivakwa zvesimbi, zviteshi zvemagetsi, mota, locomotives, zvishandiso zvemauto, michina yemuchadenga, nezvimwewo zvinofanirwa kurapwa pamusoro isati yapfekwa. Metal hasha ndiyo inoshanda zvakanyanya yekuchenesa svikiro.
Kazhinji, pane vakakanda simbi pfuti (yakakwira kabhoni simbi kupfurwa uye yakaderera kabhoni simbi kupfura), simbi grit, iron yakapfura, simbi grit, simbi isina tsvina yakatemwa waya / yakagadziriswa bara, Stainless simbi grit, simbi yakatemwa waya, kutakura simbi grit, etc. Yakakwira-inoshanda simbi abrasives haisi nyore kuputsa, yakaderera guruva, yakaderera kushandiswa, yakakwira yekuchenesa kugona, uye yakanaka kwese chigadzirwa kuita. Inogona kudzora zvakanyanya mashandisiro emushandisi, nokudaro ichideredza mutengo uye kudzikisa mweya.
Saka mubvunzo ndewokuti, sei kusarudza yepamusoro simbi abrasives?
Kuita shuwa kuti iyo yekumusoro yekurapa mhedzisiro yakakwana kusvika pamwero, iwo maviri epakati zviratidzo zveesimbi abrasives: kuchenesa kugona uye kudyiwa.
Kusanzwisisana kwakati wandei mukusarudzwa kwesimbi inokanda:
Iko kukanda simbi kupfura rounder kuri nani?
Iko kukura kwechidimbu kwakanyanya yunifomu, zvirinani?
Iyo yakajeka kuoneka, zvirinani?
Mukuita kwekugadzira uye kugadzirira kupfura kwesimbi, iyo simbi yakanyungudutswa inotonhorera kubva pamvura kusvika yakasimba, uye inodzikira panguva yekutonhora. Iyi shrinkage inoitwa mune yakasununguka nyika, uye hapana riser senge yekudira castings kune zvishoma zvinowedzerwa nesimbi yakanyungudutswa uko vhoriyamu mushure mekudzikira yaderedzwa, saka elliptical particles ane akanyura nzvimbo anoonekwa. Rudzi urwu rwezvimedu rwakawana shrinkage yakakwana, uye chimiro hachina kutenderera asi chimiro chakakora. Nekudaro, kana iyo simbi yakapfura iyo isina kubvumirwa zvizere, chimiro hachina kuomarara, kune zvikanganiso zvemukati senge shrinkage porosity uye shrinkage cavities.
Kukanda simba E = 1 / 2mv2, kana chimiro chakakora, iine vhoriyamu imwe chete, iyo hombe kuwanda kwehutano M iri, simba rinokanganisa rakakura, uyezve hakuna nyore kupaza. Nenzira iyi, haina kunaka: iyo simbi inotenderera yakapfura zvirinani.
Saizi yezviyo yesimbi yakapfurwa yakawanda yunifomu, zvirinani?
Mundima yekuchenesa, pamusoro peiyo workpiece inofanirwa kucheneswa kana kupfapfaidza ichaumba makomba pane yakacheneswa nzvimbo. Chete kana makomba nemakomba zvichipindana zvizere, iyo nzvimbo yese inogona kunyatso kucheneswa.
Iyo yakafanana yunifomu saizi yesimbi yakapfurwa ndeye, iyo inotora nguva yakareba kuti isvike pakuzara kuzere kwemakomba.Kune mapfuti esimbi ane chimwe chidimbu saizi yekuvhenganisa chiyero, hombe simbi pfuti dzinonyanya kushandiswa mukuchenesa, uye diki simbi mapfuti ichachenesa iyo interspace pakati penharaunda inorapwa nehukuru-saizi simbi kupfura
Parizvino pane marudzi maviri e yakakwira kabhoni simbi kupfurwa: isina kudzima simbi inopfura uye yakapetwa kaviri simbi kupfura. Izvo zvakaoma kusiyanisa kubva mukuumbwa, kuomarara, uye nesimbi graphic chimiro. Nekudaro, iyo yakapetwa kaviri simbi yakapfurwa ine zviyo zvakanaka uye hwakanyanya kuneta hupenyu, Iyo tsanga yeiyo imwechete inodzima simbi kupfura yakashama uye hupenyu hwekuneta hwakaderera. iyo yakatetepa, inotaridzika kupenya; apo simbi yakapfura mushure mechipiri kurapwa kwekudzima, iyo Fe3O4 firimu iri pamusoro inova mukobvu, hairatidzi mwenje, uye haitarisike kupenya. Saka iyo yakajeka nzvimbo haina kuyera zvirinani zvigadzirwa, asi kana iri yakapetwa kaviri simbi kupfura kana kwete ndiyo inonyanya kukosha nyaya.